Dowladda Maraykanka oo Ku hanjabtay in ay Joojin doonto Dhuumaha Gaaska ee Nrd Stream 2 | Allbalcad Online
Home WARARKA Dowladda Maraykanka oo Ku hanjabtay in ay Joojin doonto Dhuumaha Gaaska ee...
Dowladda Maraykanka ayaa ku hanjabtay inuu joojin doono furitaanka dhuumo muhiim ah oo gaaska Ruushka u diri doona Yurubta Galbeed, haddii Ruushku soo weeraro Dalka Ukraine.
Nord Stream 2 ayaa ka socon doonta Dalalka Ruushka ilaa Jarmalka, khamiistiina Saraakiisha Dowladda Jarmalka ayaa waxay sheegeen in mashruucan uu wajihi karo cunaqabatayn hadii Ruushka uu weeraro.
Xulafada Reer Galbeedka ayaa sheegay in ay beegsan doonaan Dhaqaalaha Ruushka haddii uu soo duulo, waxaana hadaladii u dambeeyay ay muujinayaan in ay sii adkaanayaan mawqifkooda dhuumaha faa’iidada badan leh.
Dowladda Ruushka ayaa beenisay inuu qorsheynayo weerar in uu ku qaado Dowladda Ukraine.
Balse tobanaan kun oo askari oo Ruush ah oo todobaadyadii la soo dhaafay ku soo ururay xudduudaha Ukraine ayaa xiisad sii kicisay, waxaana sare u qaaday cabsida laga qabo in lagu soo duulo.
“Waxaan rabaa inaan si cad u caddeeyo: haddii Ruushku ku soo duulo Ukraine si uun ama si kale, Nord Stream 2 hore uma socon doono,” sidaasi waxaa sheegay Afhayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka Ned Price una sheegay Warbaahinta NPR.
Laakin waxa uu intaa ku daray in aanu “aan geli doonin waxyaabaha gaarka ah” ee ku saabsan sida loo joojinayo, waxaana la is weydiinayaa in Maraykanku uu awood u leeyahay in uu joojiyo mashruuca. “Waxaan kala shaqeyn doonnaa Jarmalka si aan u hubinno inaysan horay u socon,” ayuu yiri Mr Price.
Halka Maraykanku uu ku adkaystay in uu gebi ahaanba joojinayo furitaanka dhuumahaas, Jarmalku waxa uu sheegay oo kaliya in aanu meesha ka saarayn in cunaqabatayn lagu soo rogo mashruuca.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Dalka Jarmalka, Annalena Baerbock, ayaa baarlamaanka u sheegtay in xulafada reer galbeedka ay “ka shaqeynayaan xirmo adag oo cunaqabateyn ah” oo daboolaya dhinacyo “ay ku jiraan Nord Stream 2”. Laakiin waxay ku dartay inay door bidayso inay “sii waddo wadahadalka” Moscow.
Hadalkeeda ayaa yimid ka dib markii safiirka Jarmalka ee Maraykanka Emily Haber ay Twitter ku soo qortay “waxba miiska kama baxayo, oo uu ku jiro Nord Stream 2” haddii Ruushku ku xadgudbo “madaxda Ukraine”.
Previous articleGuddiga Xallinta Khilaafaadka oo Hakiyey Natiijada Doorashada Saddex Kursi
Next articleHaweeneyda Xiomara Castro oo loo Dhaariyay in ay noqoto Madaxweynaha Dalka Honduras